Linux terminal aliasing dzidziso ("shandura mirairo") | Linux Vakapindwa muropa
Dzidziso pane ma aliases eiyo Linux terminal ("shandura iyo mirairo")
An alias, maererano neRAE, izita rezita kana zita remadunhurirwa. Zvakanaka, sevazhinji venyu muchazoziva, pane rairo muLinux inonzi aliases iyo iwe yaunogona kuisa mazita emadunhurirwa kana mazita emadunhurirwa sekureva kweduramazwi, kutumidza mirairo Dzinenge dzese dzidziso uye mawebhusaiti andaona ayo anotaura nezvezvibodzwa anoita saizvozvo kubva pakurerutsa nzvimbo yekutarisa.
Ndinoreva shandisa ma aliases kupfupisa mazita emimwe mirairo uye voita kuti zvive nyore kunyora, chimwe chinhu chinokosheswa kana iwe uchipedza maawa uchitaipa mune inouraya nekuda kwebasa rako. Zvakare kuyeuka zvirinyore mimwe mirairo iwe yaunogona kupa mamwe mazita aunoda. Asi pano ini ndoda kunyora chinyorwa kubva kune kwakasiyana maonero, kunyangwe zviine chinangwa chakafanana nezvimwe, ndiko kuti, kuita kuti hupenyu huve nyore. Asi ... ko kana iwe uka "dudzira" mirairo?
Rega nditsanangure, zvandiri kuedza kutaura ndezvekuti kana usiri nyanzvi yeganda uye uchifanira kushandisa mirairo kazhinji, Iwe unogona kufarira kuvadaidza nemazita avo muchiSpanish, sezvo nyika yemakomputa yakavakirwa kuChirungu uye ese iwo anoenderana nemaacronyms kana mazwi eSaxon. Asi nema aliases unogona kugadzira mazita emadanho muSpanish, izvo zvinoita kuti iwe uvarangarire nenzira iri nyore uye yakajeka iwe.
An alias anoshanda sei? Zvakanaka, ma alias anotibvumidza kutumidza zita kana kuti "alias" mirairo miviri nemirairo pamwe nesarudzo dzadzo. Semuenzaniso, fungidzira kuti iwe unoda kutumidza zita rekuti "ls -l" unova murairo watinoshandisa zvakanyanya, pamwe ne "df -h" kuitira kuti iwe ungofanidza kunyora "l" mune yekutanga kesi uye "r" mu yechipiri kumhanya.
Kubva ikozvino zvichienda mberi, kana iwe ukanyora l iwe waizoita "ls -l" uye kana ukanyora r iwe waizoita "rm -i". Asi ini ndinopfuurira nepfungwa yangu, fungidzira kuti iwe unoshandisa iyo terminal kazhinji uye kuti hauna kunyatsonaka muChirungu uye hausi nyanzvi kwazvo mugobvu futi. Kana iwe uine "mirairo muchiSpanish" zvinoita kuti hupenyu hwako huve nyore. Nezve izvo, isu tichaisa mimwe mienzaniso yekuita Spanishize mirairo nema aliases:
Somuenzaniso, kubuda «Buda» saka kuve Spanish:
Kuti utarise nzvimbo yemahara pane hard drive, panzvimbo pe "df -h" izvo zvingave zvakaoma kuti iwe urangarire, uye kunyanya kana usingaishandise kakawanda, tiri kuzoiita Spanish:
Fungidzira uine Debian kana chinobva uye iwe uchida kushandisa yakanaka alias yekuisa mapakeji ako:
Nenzira, kana iwe usiri kurangarira chero ma aliases kana unoda here kuona zvese zvinetswa iyo yawakatogadzira, ingoisa:
Uye kana iwe ukaneta uye uchida kubvisa ma aliases- Shandisa iro raas rairo rinoteverwa nezita rezita raunoda kubvisa. Semuenzaniso, kubvisa ma alias ekubuda, yedu "kubuda":
Uye iwe unogona kuenderera uine zvaunogona kufunga nezvazvo ... Castilianize iyo terminal!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Dzidziso pane ma aliases eiyo Linux terminal ("shandura iyo mirairo")